USB မှ Window တင်နည်း & Window7/ 8 ISO Images ဖိုင်လ်များ ~ IT Guide Myanmar
9:48 AM USB Drive ဖြင့် Window တင်နည်း No comments
ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မေးနေလို့ (USB Drive ကနေ Window 8 တင်တတ်ချင်လို့ပါတဲ့) ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြနေရင် အချိန်ကုန်ပြီး နားမလည်မှာစိုးလို့ ပြန်လည် ခိုးချ (အဲ) ကူးချ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ဘာမှမခတ်ပါဘူး ပုံလေးတွေကြည့်ရင် လုပ်တတ်သွားမှာပါ... USB ကနေတဆင့် Window တင်ပုံ တင်နည်းတွေကိုလည်း အရင်ကတင်ထားပေးဖူးပါတယ် .....:)
USB ကနေတဆင့် Window တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့.......
အရင်ဆုံး Window 8 ဖြစ်ဖြစ် Window7ဖြစ်ဖြစ်ကိယ်တင်ချင်တဲ့ ISO images ဖိုင်ကို ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ဒေါင်းယူထားဖို့လိုပါတယ် (အားလုံး 2GB , 3GB အထက်မှာချည်းပါပဲ).......
ဇွဲ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆိုင်တစ်ဆိုင် မှာပြေးဝယ်လိုက်ပါ....:P
ပြီးရင် 4GB ပမာဏ နဲ့ အထက် (8GB ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ) ရှိတဲ့ USB တစ်ချောင်း လိုပါတယ်...
ISO images တွေ မရှိသေးလို့
(တချို့ Download လုပ်နည်း မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ ဒေါင်းမရဘူးချည်းဘဲ ပြောနေလို့ Download လုပ်နည်းလေးပါ တခါထဲ ဖေါ်ပြပေးလိုက်တယ်)
ဒေါင်းနည်းကတော့ ပထမဆုံး ကိုယ်ဒေါင်းယူချင်တဲ့ Download ဆိုတဲ့ Link လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ New Tab အနေနဲ့ နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ....5စက္ကန့်လေး ကို သည်းခံပြီး စောင့်ပေးလိုက်ပါ (5 စက္ကန့်အတွင်း သူကြော်ငြာချင်တာလေးကို ပေးကြော်ငြာလိုက်ပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....:P )
ပြီးရင် အောက်ကပုံလေးအတိုင်း SKIP AD ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ အေးဆေး ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ....:)
ဒါက Window 8 ISO images ဖိုင် 64bit / 32bit ပါ....အောက်က သူ့ရဲ့ Serial Key တွေပါ:)
64-bit (x64) Download (3.3 GB) Sha 1 hash —
32-bit (x86) Download (2.5 GB) Sha 1 hash —
ဒါလေးတွေကတော့ Window7ISO images ဖိုင်လ်တွေပါ.. ကြိုက်တာရွေးယူနိုင်ပါတယ် (တစ်ခွန်းဈေး)...:P
ဒါလေးတွေကတော့ 2010 Version တွေပါ...။
[Unofficial] English: Download
Windows7Home Premium N x86 (32-bit): Download
Windows7Home Premium N x64 (64-bit): Download
Windows7Professional N x86 (32-bit): Download
Windows7Professional N x64 (64-bit): Download
In today’s time , it’s not difficult to install Windows from pen – drive or another USB Flash drives. In fact , Microsoft itself providesasoftware to makeapen drive that can boot your computer and install Windows 8.
စိတ်ကြိုက် ဒေါင်းယူပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီ Windows7USB/DVD Tool ကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါ USB ကို ကွန်ပြူတာမှာ တပ်ပြီး ....
ကျန်တာတွေကိုတော့ အောက်က ပုံလေးတွေ အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားလိုက်ပါ....:)
Browse ကိုနှိပ်ပြီး စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ ISO ဖိုင်လ်ကိုရွေးပေးပါ..။
2. Choose your ISO file for Windows 8 like in above screenshot. To download Windows 8
3. Choose USB device to install windows 8 from USB drive.
ဒီနေရာမှာ မိမိ ရဲ့ USB Drive ကို ရွေးပေးပါ
4. Select your USB device from the drop-down list. And hit Begin Copying.
ဒီအဆင့်မှာ USB ကို Format ရိုက်မှာပါ..
(USB ထဲကအရေးကြီးတဲ့ Data တွေရှိရင် အခြားတစ၀်နေရာမှာအရင်ဆုံးရွေ့ထားပေးပါ)
5. Press next to format you USB device and copy Windows 8 files.
6. After this application will copy windows files to your pen drive.
7. After Process completes , restart your computer and boot your computer with USB device and install Windows 8 Preview.
အပေါ်က အဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် USB ကို ကွန်ပြူတာမှာ တပ်ပါ Restart ချပါ Window ပြန် တတ်တတ်လာချင်း Boot Menu ကိုဝင်ဖို့ F2 (or) Dle ကိုနှိပ်ပါ (Boot Menu ကို ဝင်ဖို့ နှိပ်ရမဲ့ Key တွေက ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံး မတူနိုင်ပါဘူး) Acer Window7မှာတော့ F2 ကိုနှိပ်ပြီး Boot Menu ကို ဝင်ရပါတယ်)
Boot Menu က Boot tab မှာ first boot device ကို USB ကို ရွေးပြီး F10 နဲ့ Save and Chang ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ...။
Window ပြန်တတ်လာရင် USB နဲ့ Window တင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ....
ကျန်တဲ့ အဆင့်တွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင် ညှစ်အားလေးသုံးပေးလိုက်ပါ... :D
နားမလည်သေးဘူးဆိုရင် ဒီနေရာ မှာ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ် ရိုးရိုး Window တင်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ....
သြော်....တစ်ခုကျန်သေးတယ် Window Activator တွေ လိုအပ်ခဲ့ရင် ညာဘက် Sidebar က window7Activator ဆိုတဲ့ Label မှာ ရယူနိုင်တယ်နော်....:)
Posted in: window 7, နည်းလမ်းများ, ဗဟုသုတ